Otu nke kasị mma ụzọ na-na ọkachamara anya gị videos bụ site na-agbakwụnye a ezi àgwà Intro ha, na Mgbe mmetụta ọ bụghị dị ka akụda a atụmanya dị ka ọ ga-iyi, ị nwere ike ịmepụta ụfọdụ ukwuu ọkachamara intros iji nanị na isi Mgbe mmetụta presets na mmetụta.
Akpa oyi anyị melite anyị mejupụtara, m na-eji 320x240 N'ihi na mma nke web mmepụta ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ na-eji gị Intro na gị YouTube ọwa ka ihe atụ, ị chọrọ elu àgwà mmepụta na ọkụ gị video faịlụ, n'ihi na ọtụtụ ndị ụbọchị ndị a nke ahụ ga-1080p.
A anyị tinye a siri ike oyi akwa site na iji Layer> New> Solid, m hapụrụ m Black ma ị nwere ike họrọ a na agba kwesịrị ekwesị ka gị mkpa. Na n'elu nke anyị kwukwara anyị ederede n'ígwé site na iji ederede bọtịnụ na top menu na anyị aha, YouTube ọwa aha ma ọ bụ yiri na ya, m na-eji a iche iche oyi akwa maka onye ọ bụla okwu otú anyị nwere ike ịgbanwe ihe ha n'adabereghị, na N'ikpeazụ, anyị nwere nke a.
Ka ị pụrụ ịhụ, anyị nwere si zụlite anyị, na abụọ ederede n'ígwé, otu onye na okwu ahụ 'Ijuanya' na ya, otu onye na okwu ahụ 'Share' na ya. Site ọkụkụ nhọrọ ngwá ọrụ (akụ na nnọọ aka ekpe nke n'elu menu) ị nwere ike ịdọrọ ederede gburugburu na-edebe ha kpọmkwem dị ka i chọrọ. Mgbe a na isi ị ga-eme ka n'aka gị ederede bụ ọmarịcha agba ka dakọtara ma gị branding ma ọ bụ ihe ndị ọzọ. M na-aga ịgbanwe otu onye okwu na a miri emi anụnụ anụnụ na agba ka ọdịiche dị ya, a na-eme site na-ahọpụta ederede na iji ngwá ọrụ na ederede panel ịgbanwe agba. Ikpeazụ anyị Mbido maka Intro otú anya dị ka nke a
2. agbakwụnye mbụ mmetụta
Ihe mere m gara nsogbu nke nwere ederede na iche iche n'ígwé bụ otú ahụ ka m nwere ike ha na-egosi n'oge dị iche iche, m chọrọ ebighi-ebi akụkụ na-abịa na nke abụọ, n'ihi ya, na-eme nke a ka m ịdọrọ oyi akwa tinyere usoro iheomume n'ihi ya, ọ na-amalite mgbe 5 abụọ akara.
Ugbu a, m na-aga azụ mmalite nke usoro iheomume ma na-'na-egbukepụ egbukepụ si mmetụta na preset taabụ na ịdọrọ ya n'elu ijuanya oyi akwa, m ikwugharị nke a na òkè oyi akwa inye a mma na-egbukepụ egbukepụ ma akụkụ.
Ị nwere ike igwu egwu na ntọala nke na-egbukepụ egbukepụ utịp ke mmetụta panel-ekpe na-anya na ị bụ mgbe, na na mbụ anyị mmetụta mere.
3.-agbakwụnye na Transition
Dị ka ọ bụ ihe Intro, ị na-achọghị gị utu aha ma ọ ika aha ka dị nnọọ egosi na ihuenyo, na ya mere ebe a anyị na-eji mmetụta n'ime Mgbe mmetụta ọzọ. Pụta ìhè na-eche oyi akwa anyị họrọ anyị mgbanwe. M ẹmende CC Ìhè Hichapụ dị ka na-amasị m na mmetụta, ma i nwere ike na-agbalị iche iche ndị chọta ọkacha mmasị gị.
Ebe etinyere ntughari ka oyi akwa m ugbu a mkpa ịgbanwe ya, m chọrọ ntughari rụchaa dị ka nke abụọ ederede-egosi na 5 abụọ akara. N'ihi ya, m setịpụrụ mbụ m keyframe maka mgbanwe na efu timeframe ebe. Na m na-'dechara' uru ka 100% Ya mere, Okwu bụ kpamkpam anya ná mmalite na mgbe ahụ na-egosi na 5 sekọnd ebe m setịpụrụ nke abụọ keyframe na a dechara uru nke 0%.
Nke a na-nnoo na-agba ọsọ na mmetụta na agbara ma ọ ka na-arụ ọrụ ọma m na-anya. Ka anyị pụrụ ịhụ, mmetụta okokụre otu etiti tupu nke abụọ okwu pụtara, ma achọghị m na dị nnọọ gbapụta, yabụ anyị chọrọ anya na-agbakwunye na mmetụta n'ebe ahụ.
4. The abụọ Transition
I nwere ike iji otu mmetụta maka ma n'ezie, m họọrọ CC Radial n'ọtụtụ Hichapụ, ọ bụ nnọọ mmetụta m na-ahụ mma. M kwukwara ya ndị oyi akwa, mgbe ahụ, setịpụrụ 'ẹkụre' ka 100% iji hụ m ederede bụ-adịghị ahụ anya na ịtọ mbụ keyframe ebe a.
Mgbe ahụ, m kwagara usoro iheomume on 3 sekọnd 8 abụọ akara na kwukwara nke abụọ keyframe na ntughari ẹkụre set na 0%, Ya mere, Okwu bụ n'ụzọ zuru ezu na-ahụ anya.
5. Ìhè zaa
Mezue mmetụta, otu ugboro abụọ okwu nwere pụtara na m chọrọ tinye na a ikpeazụ okoko, na ebe a m họọrọ CC Ìhè zaa mmetụta dị na mmetụta> n'ịwa ngalaba, e nwere ọtụtụ na-agbalị, m dị ka onye a.
Na ntọala taabụ m adịkwa ìhè agba-acha anụnụ anụnụ nke m ederede site na iji eyedropper ngwá ọrụ, na ịtọ ọtụtụ keyframes otú ìhè kpochapụ gburugburu etiti ma adịkwaghị agbapụta si. The usoro bụ otu ihe ahụ dị ka ndị ọzọ keyframes, mwube mmalite keyframe maka onye ọ bụla na-ekwu na ị chọrọ ịgbanwe, na-agagharị usoro iheomume, mwube na-esote ụkpụrụ na na.
Ke idaha m ji direction (ịkwaga ya gburugburu etiti), ekpochapụ siri na onu osisi ike (ma belata ka 0 ịjụ oyi si na mmetụta) àgwà na-anya m bụ mgbe.
M malitere site mwube ma osisi ike àgwà efu, ya mere ha na-agaghị na-egosi n'oge mbụ ederede ikwu n'ụzọ, m ahụ kwukwara keyframes maka nduzi ma ma osisi ike ntọala nri ke ebe ikpeazụ ederede mgbanwe-agwụ, a na-ewetara ndị siri na tent ntụziaka nke ìhè doo ka m chọrọ ka ọ na akpa egosi, mgbe ahụ, na 3 abụọ etiti oge m na-keyframes maka direction otú ahụ ìhè na-aga gburugburu ihuenyo, na ikpeazụ keyframes m belatara osisi ike azụ ala na-efu n'ihi ma zaa na onu ntọala otú ahụ mmetụta nnoo-apụ n'anya na njedebe nke usoro.
Nke a pụtara na anyị ugbu a nwere ọmarịcha iwebata ebe onye okwu mgbanwe na a ìhè mmetụta na-arụ gbara ha gburugburu.
Nke ahụ bụ a obere n'ime mere nnọọ na iji ngwá ọrụ dị n'ime ọkọlọtọ Mgbe mmetụta n'ọbá akwụkwọ, dị ka anyị pụrụ ịhụ na ọ na-adịghị a mgbagwoju anya ka Job tinye ụfọdụ ọkachamara na-achọ mmetụta ka intros gị videos, nanị ihe m ẹmende ikwu n'ụzọ na mmetụta m eme dị ka, ma e nwere ọtụtụ ndị ọzọ gụnyere ke Mgbe mmetụta id ndị a na-adịghị amasị gị, ọ bụrụ na ị maghị ihe ụfọdụ n'ime ha anya dị ka na-adịghị Bridge arụnyere na-ekwe ka ọnụọgụgụ, nanị tinye ha oyi akwa na-agba ọsọ site ẹkụre ọnọdụ ịhụ ihe ọ na-eme.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịga n'ihu, ị pụrụ ịzụta ọtụtụ dị iche iche nkwụnye ins itinye ndị ọzọ mmetụta ụdị, ngwa anya njali elu na ndị ọzọ na mmetụta nchịkọta nwere ike mfe kwukwara, ha na-arụ ọrụ dị ka presets na mmetụta n'ime Mgbe mmetụta onwe ya na pụrụ isi mụbaa na ohere ị nwere.
Olee otú iji tọghata Video ka Nexus 7
Olee otú iji tọghata MSWMM faịlụ ka MP4
Olee otú Tinye Foto dị ka Video
> Resource> Video> Olee otú Mee ihe Intro na Mgbe mmetụta